Ọrụmalaysia - Malite ọrụ nyochaa nke a ma nweta ọrụ!
Ọrụ na Poland - Mee maka ọrụ na European Union
Ọrụmalaysia - Bulite Na-amalite Taa!
Ọrụmalysia bụ ihe kasị mma na ọnụ ụzọ dị elu maka ndị na-achọ ọrụ. N'ikwu okwu n'ozuzu, ọrụMalaysia ọrụ n 'ọrụ ebe kachasị mma maka ndị ọrụ. Onye ọ bụla nwere ike ịmalite nyocha ọrụ na ụlọ ọrụ anyị. N'ihi na anyị tụkwasịrị obi ndị na-achọ ọrụ na ndị ọrụ. Na ọtụtụ n'ime ha mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ọbụna chee na afọ ojuju. Ya mere, ị kwesịrị malite ọrụ anyị ma nweta ọrụ!. N'oge enwere karịa 241,057 onye na-achọ ọrụ na-arụ ọrụ. I kwesịkwara inweta ohere. A ga-akpọsa ohere niile na JobsMalaysia ọnụ ụzọ maka ụgwọ ụlọ.
N'okpuru ebe a, ị nwere ike ịchọta ihe ọmụma. Na www.jobsmalaysia.gov.my ebe ọrụ. Na ihe mere o ji dị mkpa ịdebanye aha na ha. Nanị, ọ bụrụ na gọọmentị na-akwado ụfọdụ ọrụ. Ọ ghaghị ịbụ ezigbo ihe. Na nke a haziri maka ozi ọha na eze. Biko lee anya na website oru jobsmalaysia.gov.my. Na-agbalị ịnweta ọrụ na ụlọ ọrụ a. Maka ha dị ezigbo mma. Na n'ezie otu n'ime ihe kacha mma maka ndị na-achọ ọrụ. Nile Malaysia. Ya mere, malite na ọnụ ọgụgụ gọọmenti.
Ọ bara uru ịnweta ọrụ na Malaysia?
Ọfọn, n'ezie ọ bụ ebe dị mma maka ndị ọrụ mpaghara. Nanị n'ihi Olu ndi mmadu na Malaysia Ozi. Ugbu a na enyere onye ọ bụla nọ na Malaysia aka ọrụ. Ndị ọchịchị nke Malaysia emewo mkpọsa pụrụ iche maka ndị ọrụ na Malaysia. Ugbu a ọ bụ ndị a na-arụrụ ọrụ n'ahịa ahịa. N'ikwu okwu n'ozuzu, ịkwanye ọrụ ọrụ na JobsMalaysia.com. N'ihi na gọọmenti na-emekarị ihe ngosi a. Na ikike mpaghara mana, ugbu a na-etinye ndị ọrụ. Gọọmenti nwere ọtụtụ iwu ọhụrụ. Na n'ezie otu n'ime ha bụ ịmalite nke ego ndị ọrụ mpaghara. N'ihi na n'ụzọ dị otú ahụ, a na-agwa ndị ọrụ mpaghara obodo ahụ.
Na Malaysia, enwere 13,627 New Employers n'ọrụ na 2019.
Ebe obibi ọhụrụ na 114,138 na-arụsi ọrụ ike na 2020.
Karịa 183,433Placement na 2017.
Karịa 500,000 ndị ọrụ na-aga Dubai si Malaysia.
ọbụna Ndị India na-achụsasị nwere ike ịchọta ọrụ n'ebe ahụ !.
Jobmalysia.com bụ ụlọ ọrụ dị elu zuru oke. Ọbụna ndị gọọmenti ịmepụta ihe na saịtị a na India. Dịka ọmụmaatụ, Deputy Ministerial Resources Minister Datuk Mahfuz Omar. jikwaa ọkwa ole na ole nke ibe. N'ihi JobsMalaysia, bụ isi ụzọ maka ọrụ ahịa na Malaysia. Ọ bụrụ na ị na-achọ ịchọta ọrụ na Malaysia. Ị ghaghị iji ọrụ ha. Karịa 135,000 nyochaa Google kwa ọnwa.
Kuala Lumpur JobsMalaysia
Kuala Lumpur, nke bụ eziokwu, bụ ebe dị mma maka ọrụ. Na ndị na-achọ ọrụ, n'okpuru ọnọdụ ndị ahụ, na-eti ebe a. Ọrụ dị mma n'ebe ahụ na n'aka nke ọzọ, ọ ga-efu oge ọ bụla iji gbalịa. Ndị na-achọ Job gburugburu ụwa, ruo ugbu a ka nwere ohere maka ndị ọrụ ná mba ọzọ. Ya mere, gịnị mere na ị gaghị eji ọrụ anyị ma chọpụta ọrụ ngwa ngwa. Ụlọ ọrụ anyị bụ na-enyocha ụwa nile.
The Jobsmalysia ebe a ma na e nwere isiokwu na-ewu ewu. Karịsịa maka ndị ọrụ mpaghara. N'ihi na gọọmentị dị na mbụ enyere aka ọrụ a. na ndị mmadụ nwere ike ịdebanye aha na-enwe obi ụtọ na ya. Ya mere, na njedebe ikpeazụ, ị kwesịrị ile anya. Maka na mgbe ị na-achọ nyocha ọrụ nwere ike ịme ihe niile. Karịsịa ndị ọrụ na ndị isi obodo. Ya mere, biko lee anya na ndabere nke nyocha ọrụ gị. Na-agbalị ịnweta ọrụ na Ọrụmalysia.gov. Maka ụlọ ọrụ a na-enyere ndị mmadụ aka.
Mmechi maka ọrụmalaysia
Ọfọn, ka anyị chee ya ihu. Ọnweghị ihe ma ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ mpaghara. Ma ọ bụ ọbụna onye na-achọ ọrụ n'ụwa. Anyị nyochaa ọtụtụ ụlọ ọrụ n'ụwa nile. Ndị ọhụrụ na ụlọ ọrụ ọhụrụ. Na-anata site n'aka ndi otu anyi ole na ole reviews. Ụlọ ọrụ a nwere nlele anya ise.
N'ihi na ha bụ azụmahịa metụtara ndị ọchịchị. Ọzọkwa na-enye ezigbo ndị ọrụ ohere na ndị ọrụ mpaghara. Ya mere, ọ ga-abụ echiche dị oke mma iji soro ha gaa.
Citylọ ọrụ Dubai City na-enye ezi ugbu a Ntụziaka maka ndị na-achọ ọrụ na Dubai. Ndị otu anyị kpebiri ịgbakwunye ozi maka asụsụ ọ bụla maka nke anyị Ndị njem Dubai. Yabụ, na-eburu nke a n'uche, ị nwere ike ịnweta nduzi ugbu a, Atụmatụ na ọrụ na United Arab Emirates ya na asusu gi.